यसरी भयो पूर्व राजकुमारीको श्रीमानको निधन
Nepali Radio / F.M. / TV दुच्छर सासु र सोझी राजकुमारीबीचको खटपटले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई चिन्ता
पूर्व शाहज्यादी शीताष्मा शाह Former princess Shitasma Shah. Photo collection: Sitaram
काठमाण्डौं, November 7, 2008- पूर्व राजकुमारीले सुत्ने तैयारी स्वरुप नाइट ड्रेस लगाइन् । त्यसपछि 'सुतिरहेका' आफ्ना श्रीमानलाई आफू आएको जानकारी दिन 'राजा ?' भनेर बोलाइन् । तर श्रीमानबाट कुनै जवाफ आएन । सुत्नका लागि श्रीमानले ओढेको सिरक निकाल्दा पो उनलाई थाहा भयो उनका प्रिय श्रीमानको जीउ पुरै चिसो भैसकेको रहेछ ।
स्व. धीरेन्द्र शाहकी माहिली छोरी शीताष्माका पति अभिनेश शाहको निधन कसरी भयो भन्ने कुराको विवरण प्राप्त भएको छ । जण्डिसका विरामी अभिनेशले जण्डिस निको नहुँदै वियर पिएकाले निधन हुन पुगेको पारिवारिक श्रोतले बताएको छ ।
स्व. अभिनेशको निधनपछि कडा स्वभावकी उनकी आमा आशा सिंह र सोझी श्रीमति शीताष्माबीच अरु खटपट बढ्ने चिन्ताले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई सताउन थालेको छ ।
जानकारीअनुसार अभिनेशको निधन भएका बेला उनकी पत्नी पूर्व शाहज्यादी शीताष्मा निर्मल निवासमै थिइन् । राति १२ बजे निर्मल निवासबाट फर्कने बित्तिकै आफ्नो हाँडीगाउँस्थित निवासमा फर्किन्, सुत्ने तैयारी स्वरुप नाइट ड्रेस लगाइन् । त्यसपछि 'सुतिरहेका' आफ्ना श्रीमान् अभिनेश शाहलाई आफू आएको जानकारी दिन 'राजा ?' भनेर बोलाएकी थिइन् । तर अभिनेशबाट कुनै जवाफ आएन । आफ्ना श्रीमान् निदाएका होलान् भनेर शीताष्मा सुत्न लागिन् ।
सुत्नकालागि अभिनेशले ओढेको सिरक निकाल्दा पो शीताष्मालाई थाहा भयो उनका प्रिय श्रीमान् अभिनेशको जीउ पुरै चिसो भैसकेको रहेछ ।
यही कार्तिक १३ गते राति भोलिपल्टको भाईटीकाकालागि तैयारी गर्न शीताष्मा निर्मल निवास गएको बेला यसरी हाँडीगाउँस्थित आफ्नै निवासमा स्व. धीरेन्द्रका माहिला ज्वाईं अभिनेश शाहको दु:खद निधन भएको थियो ।
जानकारीअनुसार जण्डिसबाट भर्खर निको हुँदै गरेका अभिनेश त्यसदिन हल्का वियर पिएर सुतेका थिए । जण्डिस निको नहुँदै वियर खाएकाले उनको निधन भएको निष्कर्ष डाक्टरहरुलले निकालेका छन् ।
शिरक उचालेर हेर्दा कुनै हलचल नगरेपछि र शरीरपनि चिसो पाएपछि अभिनेशलाई तत्काल थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल लगिएको थियो । राति २ बजे अस्पतालले उनको निधन भएको घोषणा गरेपनि उनको मृत्यु बेलुकी ११ बजे नै भएको बताइएको छ । त्यसदिन घरमा एक्लै रहेका अभिनेशको अन्तिम कुराकानी उनका काकाका छोरा संगम शाहसँग भएको थियो । अलिक अस्वस्थ अभिनेशलाई त्यसदिन बेलुकी १० बजेतिर संगमले फोन गरी 'दाजु एक्लै हुनुहुन्छ आउनुपर्छ कि ?' भनी सोधेका थिए । अभिनेशले 'भो पर्दैन' भनेकाले उनी गएनन् ।
जानकारीअनुसार पारश सिङ्गापुरबाट नआउने भएपनि नेपालमै रहेका पारशका छोरा पूर्व नबयुवराज ह्दयेन्द्रलाई अभिनेशकी एकमात्र छोरीले टीका लगाइदिने कार्यक्रम थियो । त्यसैले पारशको छोरालाई आफ्नी छोरीबाट टीका लगाइदिने तैयारीकालागि शीताष्मा निर्मल निवास गएकी थिइन् । साथमा छोरीलाईपनि निर्मल निवास लगिएको थियो । अभिनेशकी आमा आशा सिंहपनि आफ्ना दाजुभाईलाई टीका लगाइदिन दाजुभाईकहाँ गएकी र बुबापनि भोलिपल्टकको टीकाकै लागि गएकाले त्यसदिन अभिनेश घरमा एक्लै थिए ।
अभिनेशको मृत्युपछि उनको काजकृया ब्राम्हणहरुले गरेपनि पूर्व शाहज्यादी शीताष्मापनि सँगै काजकृयामा संलग्न भएको बताइएको छ । आमा आशा सिंहको दुच्छर स्वभावका कारण आशासँग बुहारी शीताष्माको मात्र होइन छोरा अभिनेशकोपनि राम्रो सम्बन्ध थिएन । बताइएअनुसार श्रीमति आशा सिंहका अघिल्तिर अभिनेशका बुबापनि केही बोल्न सक्दैनन् । त्यसैले अभिनेशको मृत्युपछि शीताष्माले सासु आशाका कारण अरु दुख व्यहोर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने चिन्ता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र लगायतमा छ ।